> Resource > Video > Sida loo qas HD iyo SD Video Files
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isku daraan labada HD ah (High Qeexid) iyo SD (Standard Qeexid) files video galay mid ka mid dhamaystiran. Si aad u samayseen, oo ah video fiicni fududahay in la isticmaalo iyo tayada sare leh waa waxa aad u baahan tahay.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa barnaamij noocan oo kale ah. Waxaa kuu saamaxayaa inaad isku daraan HD iyo SD video files muuqan iyo badbaadin file oo dhammeystiran ee dhammaan qaabab video. Ee ah kuwa kaliya qas HD iyo SD video files u gubanaya DVD ah ka dib, barnaamijkan gabi ahaanba waa doorashada ugu fiican ee arrintan la xiriira. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah gubi ah DVD disc cusub (DVD folder, ISO, file IFO waxaa ka mid ahaa) ka dib marka aad qaso files ka wada dhammaataan.
Hadda ka soo dejisan oo marka hore loo soo dajiyo. Markaas raacaan tutorial tallaabo-tallaabo hoos ku qoran in ay isku daraan aad HD iyo SD files muuqan.
1 dejinta files si aad u waqtiga
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya video fiicni this, dooran ka "16: 9" ama "4: 3" heerka ratio sida ay baahidaada. Markaasuu ku dhacay "Import" badhanka si labada HD iyo SD video faylasha dajiyaan ka kombiyuutarka barnaamijka. Ama si toos ah jiidi oo hoos u files diirada kuwaas oo ka disk adag tahay in heestii. Waxaad dareemi doontaa in kuwan oo dhan files daray qoran yihiin Murayaad ee barnaamijkan, muujisay sida soo socota.
2 HD qas iyo SD video wada xereeyo
Jiid kuwaas files daray ka album in ay Jadwalka ugu hooseysa ee interface ka. Markaas qabsato xal video ah oo ay siii. Si tan loo sameeyo, xaq guji file bartilmaameedka iyo dooran "Dalag". Daaqadda pop up ka, in aad sidoo kale noola video ee 16: 9 ama 4: 3 radio dhinac ama gacanta noola degaanka ee la doortay sida ay baahidaada. Guji "OK" si loo xaqiijiyo in aad goob.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso in aad qabato shaqo ka badan tafatirka, sida beddesha, dalagga, kala video, ku dar horyaal, guurka, saamayn, iwm, fadlan eeg sida loo edit video files >>.
3 dhoofinta dhamaystiran video file ama gubi in DVD
Guudmar video oo dhan. Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, riix "Abuur" button inay u dhoofiyaan video ah. Daaqadda pop up ka, doorto dariiqada dhoofinta. Haddii aad rabto in aad dhoofin file cusub, kaliya u tag "qaab" iyo doortaan qaab la jecel yahay video ka mid ah liiska. Waxaad sidoo kale si toos ah u wadaagi karaan on YouTube ama Facebook ee "YouTube" tab. Haddii aad rabto in aad file waa inuu gubaa si ay DVD ah, kaliya tagaan "DVD" tab, gelin ah DVD disk maran, oo ha barnaamijkan dhammayn habka inteeda kale.